Thailand: Mikendry “Androm-Pandresena” ireo Mpanao Hetsi-panoherana Manohitra Ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2013 12:44 GMT
Nokendren'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta ao Thailand ny hibodo ny Tranoben'ny Governemanta sy trano sivy hafa mbola an'ny governemanta ihany mba handrodanana ny fitantanan'ny praiminisitra Yingluck Shinawatra. Nivoatra izany taorian'ny nahafatesanà iray sy naharatràna marobe tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana nandritry ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpomba ny governemanta.
Nobodoin'ireo mpanao hetsi-panoherana ny trano maro an'ny governemanta tao amin'ny faritra natokana hisy ireo tranon'ny governemanta ireo saingy ny 01 desambra dia maro tamin'izy ireo no niparitaka mba handeha hibodo birao hafa sy foiben'onjampeo an'ny governemanta. Ny tenifototra #bangkokprotests tao amin'ny Twitter no tena nanampy tamin'ny fanjohiana ireo hetsika.
Mety ho nivoaka velona i Yingluck tamin'ny fifidianana-fitsipaham-pitokisana tao amin'ny parlemanta saingy mbola ho ela vao ho tapitra ny fihenjanana ao an-drenivohitra. Takian'ireo mpanao hetsi-panoherana ny hialàny eo amin'ny fitondràna satria izy voampanga ho saribakolin'ny zokiny lahy, ny praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra. Nailiky ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2006 i Thaksin. Any an-tsesintany izy taorian'ny niampangàn'ny fitsarana iray tao an-toerana azy ho nanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena.
Maro no nahatsiaro maivana nandre fa hoe nanapa-kevitra ny hanafoana ny famoriam-bahoaka io Alahady maraina io ireo Lobaka Mena mpanohana ny governemanta, izay efa manampy betsaka amin'ny fisorohana ny fifandonana eo amin'izy ireo sy ny mpanao hetsi-panoherana. Nifamory tao amin'ny kianjaben'i Rajamangala ry zareo Lobaka Mena
http://t.co/0jgxg8Flk1 tazan-davitra avy eo an-tsehatra, famoriam-bahoakan'ny @ #Redshirts tao @ stadium #TEPCam ora roa laza izay
Tao amin'ny kianjaben'i Rajamangala taorian'ny nanaparitahana ny Lobaka Mena, avy amin'ny @Phop_NTV : 08.33 ราช มั ง คลา หลัง มวลชน เสื้อ แดง ทยอย กลับ pic.twitter.com/QiHuaMo3EU
Ho an'ireo izay mbola manohy manontany ny antony “anafihan'ireo” mpanao hetsi-panoherana manohitra ny governemanta ny Valam-biby Dusit ao #Bangkok, dia satria ao no mitoby ireo polisy
Niaiky ny governemanta fa nanohintohina ny fanaovana asam-bahoaka nanerana ny firenena ireo hetsi-panoherana :